Gulnara Yunusova: Ny roa taonako tato amin’ny GV · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2019 4:35 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny oktobra 2014)
Nahafantatra ny GV aho tao anatin'ny roa taona mahery lasa izay, tamin'ny lohataona 2012. Ny dikan-teny Alemà tamin'ny GV no tafahaona tamiko voalohany raha nitady hirika handika teny an-tsitrapo tamin'ny teny Alemà aho. Nameno ny fangatahana tao amin'ny tranonkala GV Alemà aho, ary mbola tsaroako foana ny hafaliana azoko rehefa roa andro taorian'izay, nahazo valiny avy amin'i Katrin Zinoun aho (izay novakiako tamin'ny findaiko tamin'ny misasak'alina, satria tsy te-hiandry hatramin'ny maraina aho). Tao anatin'izany fotoana izany dia nifandray tamin'i Ekaterina Golubina tao amin'ny Lingua Rosiana aho. Koa ankehitriny dia miezaka mandika teny ho an'ny Lingua Rosiana sy Alemà aho – ary tamin'ity volana Jolay ity dia namoaka lahatsoratra ho an'ny RuNet Echo amin'ny teny anglisy aho.
Ny dikanteniko voalohany dia lahatsoratra momba ny sarimihetsika “Indray Andro eto An-tany” [mg], nosoratan'i Juliana Rincón Parra. Misaotra noho ny anjara birikinao, Juliana – tsy mitsahatra misongadina ny lahatsoratrao, manintona ny maso avy hatrany ary tena mafana sy voasaina tsara, tsy lazaina intsony fa tena mahaliana. Manantena aho fa hahita zavatra bebe kokoa ho hadika avy aminao!
Nanokatra tontolo vaovao ho ahy ny GV, ary fiovana lehibe teo amin'ny tena manokana sy ny asa ny fanombohana nanao fandikan-teny tao amin'ny Lingua. Talohan'izany, dia mpilatsaka an-tsitrapo tao amin'ny Firenena Mikambana tamin'ny alàlan'ny onlinevolunteering.org aho, saingy nosoloin'ny GV haingana izany 🙂 Ankoatra ny GV, manohana fikambanana Rosiana manampy ireo mararin'ny homamiadana amin'ny alalan'ny fandikan-teniko aho.
Midika zavatra betsaka ho ahy noho ny antony samihafa ny GV. Manomboka amin'ny endrika, ny fahafahanao misafidy tsara izay atao sy ny fotoana ary ny toerana hanaovana ny asa ary manatsara tsy misy fetra ny fandikan-teny any amin'izay misy anao rehefa miditra aterineto ianao. Zavatra iray hafa nahagaga hatrany ny hoe miasa amin'ny fomba mahomby eo ambanin'ny fitarihan'ny efipanoratana izay tena virtoaly tanteraka ny tranonkalam-baovantsika (tena goavana)! Na dia tsy mitovy aza ireo lahatsoratra – dia manome fomba fijery tsy manam-paharoa – izay tena zava-dehibe – ny GV.
Fa ny tombony lehibe indrindra (ary ny mampiavaka ny GV) dia, tsy isalasalàna fa ny OLONA ao ambadiky ny tetikasa. Mbola tsy nifanena tamin'ny fiarahamonina hafa tena manam-pahaizana sady maoderina, mahafinaritra be sy tia mandefitra tahaka izao aho. Ao anatin'ny fahasamihafana, mino aho fa raha misy ezaka kely, afaka mandresy ny Firenena Mikambana, ny vahoaka isika! 🙂
Misaotra manokana an'ireo tonian-dahatsoratra roa – Ekaterina Golubina sy Katrin Zinoun (mahafinaritra fa mitovitovy anarana ianareo!). Misaotra noho ny faharetanareo tamin'ny lahatsoratro sy ny fanontaniako, izay marobe tany am-piandohana, misaotra tamin'ireo toro-hevitrareo, misaotra nihaino ahy tamin'izay rehetra nolazaiko. Nanokatra ny varavaran'ny GV ho ahy ianareo.
Raha fehezina, dia azo lazaina tsara fa nihoatra noho ny nantenaina ny traikefako tamin'ny GV. Rehefa nidiitra ho mpikambana aho, dia nihevitra fa resaka lahatsoratra izany – kanefa toa hita fa fifaneraserana amin'ny olona marobe ihany koa izany. Rehefa nanomboka nandika teny aho dia nihevitra fa mety ho asa izany – kanefa toa hita fa fomba fiaina izany. Tratry ny tsingerintaona GV, ary mirary soa ho an'ny taona maro hitsingerina.